गर्भावस्था, बच्चा वाहक आशा आनन्द सधैं आफ्नो स्वास्थ्य तिर एक विशेष ध्यान मनोवृत्ति सम्बन्धित हुनुपर्छ। हो, corny, तर भविष्यमा आफ्नो स्वास्थ्य निर्भर बच्चा को अवधारणा र gestation समयमा आफ्नो स्वास्थ्य मा। तसर्थ, यो अवधि, सबै नियन्त्रण गर्ने राम्रो डाक्टर अवलोकन गर्न महत्त्वपूर्ण छ अत्यावश्यक प्रक्रिया।
सबैलाई गर्भमा पनि एक बच्चा जो द्वारा placenta pipsqueak सबै आवश्यक पोषक ड्र र अक्सिजन हुन्छ अनुग्रहको स्रोत, जुन गर्भनाल, द्वारा उनको आमा संग सम्बन्धित थाह छ। को placenta देखि गर्भावस्था को समयमा सुरक्षित स्थिति मा निर्भर गर्दछ। परिवहन रगत ननस्टप मद्दत गर्छ सामान्य दबाव गर्भावस्था को समयमा, त्यसैले यो स्थिर राख्न महत्त्वपूर्ण छ। आमा भने रक्तचाप सामान्य छैन, यो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, उच्च दबाव मा abruptio placenta उत्पन्न हुन सक्छ, र अन्तर्गत कम - बच्चा को विकास को लागि आवश्यक रगत प्रवाह प्रक्रिया ढिलो।
तर निराश, डर, यदि यस्तो भेरिएसनहरूमा छन्, यो आवश्यक छ। यो तपाईं को लागि आदर्श छ - पहिले, यो दबाव यस प्रकारको हुन सक्छ। जसले तपाईंलाई अन्तरिक्ष यात्री (120/80) जस्तै, धेरै दबाब मात्र हुनुपर्छ भनेर भन्छन्? गर्भवती महिला मा रक्तचाप लागि सामान्य मान फरक गर्दैन हुँदैन - र यो माथि वा तल सामान्यतया थियो भने, तपाईँले सक्रिय, तपाईं राम्रो महसुस गर्दै छन्, त्यसपछि त्यहाँ चिन्ता कुनै कारण छ। दोस्रो, तपाईं साँच्चै कुनै पनि हिचकिचाहट याद भने, नियमित रक्तचाप मापन गर्न सुरु, र एकांतर दुवै हात मा, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त गर्न।
कसरी उपकरण दबाब मापन गर्भवती महिला पनि महत्त्वपूर्ण छ। Oddly, तर चतुर डिजिटल उपकरणहरू सबै किसिमका उपस्थिति मा, विशेषज्ञहरु पुरानो tonometer रुचि, जो को शुद्धता ब्याट्री र अन्य प्राविधिक विवरण को आपूर्ति संग जोडिएको छैन। आफ्नै दबाब निम्न, कम्तिमा एक पटक गर्भावस्था को दर मा दबाव अवलोकन निश्चित गर्न antenatal क्लिनिक एउटा यात्रा भुक्तानी गर्न एक हप्ताको भूल छैन, र तपाईंले क्रममा सबै छ।
यो तपाईं tonometry खर्च कि महत्त्वपूर्ण पनि छ - अस्पताल वातावरण को एक तिरस्कार, थकान, overexertion परिवर्तनहरू देखि ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ गर्भवती महिला मा दबाव कारक (पहिलो नजर मा) किनभने धेरै सानो को समयमा माथि वा तल जान सक्षम छन्। त्यसैले यसलाई यो प्रक्रिया एकै समयमा, प्राथमिकताको शान्त वातावरण मा ले र, सबै भन्दा राम्रो छ।
कम दबाव विषाक्तता संग सम्बन्धित साधारण गर्भावस्था को पहिलो चरणमा नै प्रकट, यो सजिलै उपचार गैर-दबाइ गर्न उपज गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा हो - राम्रो, सही र खान समयमा, थप समय बाहिर, कैफीन उत्पादनहरु दुरुपयोग छैन खर्च गर्न। त्यसपछि गर्भवती महिला मा दबाव चासो कारण र सामान्य फिर्ता आउन छैन।
गर्भावस्था को दोस्रो आधा मा, शरीर आगामी जन्म लागि तयारी गर्न सुरु, पनि उहाँले धम्की छैन कि बिल्कुल निश्चित निम्ति, दबाब बढ्दै लागि सबै पूर्वापेक्षा सिर्जना अन्तस्करणले र पानी-नुन शासन को काम परिवर्तन भयो। तसर्थ, यस अवधिमा, डाक्टर विशेष ध्यान गर्भवती महिला मा दबाव तिर्न र सङ्केत गर्छ, लक्षण सम्झना छैन ताकि महिला र बच्चाहरु को स्वास्थ्य खतरा, expectant आमा द्वारा tonometer, र आफ्नो नजिक वातावरण कसैलाई पालना गर्न सुझाव दिन्छौं।
पक्कै, यो पहिले नै गठन गरिएको छ रोग उपचार गर्न भन्दा रोग को कुनै पनि प्रकटीकरण रोक्न सजिलो छ। यसरी जो डाक्टर को सल्लाह बस adhering द्वारा रोक्न सकिएला एक exacerbation, प्रोभोकिंग, छैन आत्म गर्छन्।
प्रतिरक्षा के हो? जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मबाट प्राप्त प्रतिरक्षा को कारक
को सीबीसी समावेश गरिएको छ? तालिका गूढ रहस्य
मिश्रित प्रकार मा VSD
लोक उपचार संग periodontal रोग को उपचार
Zoospermia के गर्छ? वीर्य को
मान्छे किन इन्टरनेट ट्रोल गर्छन्?
Maks Rokatanski - नायक कार्य चलचित्र "पागल अधिकतम"
फर्नीचर लुप्सको किस्म। फर्नीचर लूप्स को प्रकार र उद्देश्य
छोराछोरीलाई लागि घाँटी लागि स्प्रे कसरी चयन गर्न